Iimpawu kunye nomnqweno wentlanzi enzonzobila | Ngeentlanzi
Kuyo yonke imbali yomhlaba wethu kukho iintlobo ezininzi zezilwanyana eziye zadlula kuwo. Nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto eziqhubekayo namhlanje, nokuba zibangelwe yintlekele okanye kungenxa yokuba bengakhange bafikelele kwiindlela zokuzivelela eziyimfuneko ukuze kudlule ixesha kunye nendaleko. Oku akunjalo ngenye yeentlanzi ezizodwa ngaphandle. Ndikuxelela ngayo intlanzi enzonzobileni.
Intlanzi esezantsi yenye yezidalwa ezikulungele ngakumbi ukuphila emanzini, ukuya kwelinye inyathelo. Esi silwanyana senze ezona ndawo zikude zasemanzini njengekhaya laso elintofontofo.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu ngekhe luva ngaye ekuqaleni okanye ngokungalaziyo igama lakhe. Kungenxa yoko le nto kweli nqaku siza kufumanisa le ntlanzi ingafaniyo kunye neyoyikekayo, ikubonisa iimpawu zayo, iindawo zokuhlala kunye nokuziphatha, kunye neentlanzi ezahlukeneyo zentlanzi ekhoyo.
2 Iimpawu zentlanzi enzonzobileni
4 Ukuzaliswa kwentlanzi enzonzobileni
5 Iindidi zentlanzi enzonzobila
Njengoko besitshilo ekuqaleni, iintlanzi ezingena enzonzobileni ziye zaguqula ubuchule bokuziqhelanisa nendalo ukuze zibe bubugcisa. Oko kuye kwaba njalo, ukuba ezi ntlanzi zihlala kwiindawo zolwandle nakwiilwandlekazi apho ubomi bunqabileyo.
Njengomgaqo jikelele intlanzi enzonzobileni ikhula elwandle apho ubunzulu bayo bungaphezulu kweemitha ezili-1000. Ngapha koko, kwezi ndawo ukukhanya kwelanga kuncinci, ukuba akunjalo, kwaye uxinzelelo luphezulu kakhulu. Uninzi lweentlobo ngeentlobo zeentlanzi zaselwandle ezinzulu zikwazile ukuhlala kwiindawo zolwandle zase phakathi kwe-6000 kunye ne-9000 yeemitha ubunzulu.
Phakathi kweendawo esiziqaqambisileyo njengeendawo zokuhlala iintlanzi enzonzobileni, kufuneka sibonise ukuba zibonisa ulwazelelo lwamanzi afudumeleyo olwandle lwePasifiki nolweIndiya.
Iimpawu zentlanzi enzonzobileni
Ukuhlala kukukhanya okuphantsi kunye neemeko zoxinzelelo oluphezulu kunempembelelo enkulu kwinkangeleko kunye neempawu zentlanzi engaphantsi, ethi ukuba iyimela into ilungiselelwe ubuso bakhe obukhulu Oko kusenza ukuba sikubone njengesidalwa esivela kwelinye ilizwe. Amalungu kunye nezicubu zendlu yomzimba wakho isixa esikhulu samanzi ukulinganisa uxinzelelo lwangaphandle abaphantsi kwalo, kwaye ukungaboni ukukhanya okukhuthazayo kwenza ivumba yenye yezona zivamvo ziphucukileyo.
Ngokuqinisekileyo, eyona nto ibalulekileyo ngentlanzi enzonzobileni yintloko yayo enkulu esekwe ikakhulu kumlomo omkhulu nobanzi, Idityaniswe namazinyo amade kakhulu. Konke oku kuthelekiswa nomzimba wakhe wonke oqhele ukuba mncinci. Njengomgaqo ngokubanzi, iintlobo ezahlukeneyo zentlanzi enzonzobileni aziqheleki ngaphezu kweesentimitha ezingama-20 ubude.
Amehlo amancinci kakhulu, kwaye awasebenzi kangako kuwe. Umbala wabo wolusu uhlwempuzeke kakhulu, kwaye kukho neentlanzi eziphosakeleyo ezinokubonakalisa ukukhanya okanye ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile liphantse libonakale.
Ukutya okwenziwa yintlanzi enzonzobileni kungachazwa njengokwahluka ngendlela ethile, kuba kwezi ndawo zingafunekiyo zeplanethi intabalala yokutya ayisosidima.
I-Zooplankton kunye nezilwanyana ezahlukeneyo ezincinci zaye zaba sisitya seenkwenkwezi kwimenyu yentlanzi.. Nangona kunjalo, ezi ntlanzi nazo ziyazizingela kwaye zibonise iindlela ezithile zokuzingela (njengezitho ezikhanyayo ezitsala ixhoba, elibizwa ngokuba ifotoezikuvumela ukuba ubambe iintlanzi ezincinci ukongeza kwezinye ii-mollusks kunye ne-crustaceans. Banokuginya ezinye iintlanzi ezinkulu ngenxa yokuthamba kolusu lwabo kunye nolwabo izisu ezandayo.
Kuba akukho maxesha amaninzi abanako ukutya yonke imihla, banesifo esicothayo.
Ukuzaliswa kwentlanzi enzonzobileni
Ngamaxesha amaninzi, into enzima kwaye okuninzi ukwahlulahlula kwintlanzi ngumahluko phakathi kwendoda neyesifazana. Kwimeko yentlanzi esezantsi, I-dimorphism yesondo ibaluleke kakhulu.
Indoda incinci ngokuncomekayo kunowasetyhini, malunga neshumi ezimbalwa ngokuchanekileyo, ke umkhwa wokuzala uyamangalisa kwaye uyothusa. Amadoda aluma isisu sowasetyhini kwaye ngokoqobo abe luhlobo lokwandiswa komzimba wakhe. Nje ukuba oku kwenzeke, owasetyhini uhambisa ukutya kwindoda, ngelixa ephindaphinda ngokunika isidoda ngendlela eqhubekayo. Uhlobo lwe-symbiosis enomdla lufezekiswa ubuncinci.
Umsebenzi wokuvelisa awenzeki rhoqo, esi sesinye sezizathu zokuba ubomi beentlanzi bude kakhulu.
Iindidi zentlanzi enzonzobila
Njengokuba besesibonisile kwinqaku lonke, iintlanzi ezinzonzobila liqela leentlanzi ezibandakanya iintlobo ezahlukeneyo ezinempawu ezifanayo, indlela yokuziphatha kunye nendlela yokuphila.
Phakathi kwazo zonke sibalaselisa Intlanzi yasePelican (i-Euryphaynx pelecanoides), ohlala kwi-8000 yeemitha ubunzulu kwaye unomlomo omkhulu; i Iintlanzi zeNyoka (iStomias boa) ohlala ngaphakathi kweemitha ezingama-4500 kwaye uphawuleka ngamazinyo akhe anamandla; kwaye i Iintlanzi ezi-Spiny (Himantolophus appelii) enobungakanani beesentimitha ezi-4 kuphela ubude.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi esezantsi
Iimali zeMarianito sitsho
Ilungile iposti yakho, kuphela kokuba umfanekiso wokuqala uyimodeli yesilo esivela kwimovie Star Wars Isiqendu I
Phendula uMarianito Perales